एनके श्रेष्ठ ‘प्रकाश’
मैले पहिलेदेखि भन्दै आएको छु, सांसद् विकास कोष आवश्यक छैन मात्र होइन, अनुचित छ। अहिले कोभिड–१९ को संकटका सन्दर्भमा यसको खर्च नभएको रकम (ज्यादै कम मात्र खर्च भएको होला) कोभिड–१९ कोषमा राखौँ र अबदेखि यो शीर्षकमा बजेट नराखौँ। यो सही छ। निर्णय गरिहालौँ।
सांसद् विकास कोष राख्नुको उद्देश्य नै शत प्रतिशत चुनावी भोट ब्यांकका लागि मात्र हो। आफ्ना कार्यकर्ता रिझाउनेभन्दा अन्य कुनै काम भएको पनि छैन र हुने पनि छैन।
कोरोना–कहरका बेला यो देशका हरेक नेता र प्रशासकले आफ्नो सहुलियतअनुसार नेपाललाई चीन, भारत, इटाली, कोरिया, अमेरिका र बुर्किना फासोदेखि सुरिनामसम्म दाँजे, तर हाम्रो हालतबारे कसैले नेपालसँगै दाँजेर हेरेनन्।
सबभन्दा रिस त भारत र अम्रिकासँग तुलना गर्दा पो उठ्छ। अघिपछि ‘उनीहरूभन्दा कम हो हामी ?’ भन्दै तीन बित्ता उफ्रिने ! पन्छिने अवस्थामा ‘अम्रिकाजस्तो देश त छटपटाइराख्या छ’, ‘भारतजस्तो देशमा त त्यति मात्र संक्रमण भो’ भन्दै उम्लो सोझ्याउने ! यिनका उम्ला बटार्दिनुजस्तो !
सामान्य अवस्थामा न्यायोचित नाफा व्यापारको अभिन्न अंग हो। राष्ट्रिय संकटको बेला व्यापारीबाट यस्तो नाफासमेत नहेरी राज्यलाई सघाउने अपेक्षा गरिएको हुन्छ। यस्तो बेलामा कालोबजारी ! त्यो पनि कूटनीतिक व्यक्तिको आवरणमा ! यस्तो अपराध गर्नेलाई कानुनबमोजिम दण्ड दिनैपर्छ।
‘यो नेपाल हो, जे पनि हुन्छ’ भन्ने केही मानिसको भाषा कहिले परिवर्तन होला ?
महामारीसँग लड्न अधिनायकवाद नै चाहिन्छ भन्ने चीनको प्रोपागान्डा हो। यसको पछि लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने अरू देशहरूको विवेकको कुरा हो।
कुनै पनि देश (अपवाद छोड्दा) पूर्ण अधिनायकवादी हुँदैन। आइडियल दलीय व्यवस्थामा पनि दलहरू संवैधानिक सीमाभित्र रहेर सकेको आदर्श थोपर्दछन्। तुलनात्मक रूपमा नियन्त्रित समाजले अभ्यस्तताको कारणले सरकारी निर्देशन मान्न सहज ठान्दछ।